သတင်း - LESITE |ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုအသစ်ကို အဆင့်မြှင့်ထားပြီး အမှတ်တံဆိပ်ပုံသဏ္ဍာန်သည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသည်။
ထုပ်ပိုးမှု အဆင့်မြှင့်တင်မှုအသစ်ဖြင့် နှစ်သစ်နှင့် ဘဝသစ်
အချိန်သည် အိပ်မက်ရှာဖွေသူထံတွင် တည်ရှိနေပြီး ၎င်းသည် နောက်ထပ်နွေဦးနှစ်ဖြစ်သည်။ 2020 ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အခက်အခဲတွေကို အတူကျော်ဖြတ်မယ်၊ ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ပါ ဒါမှမဟုတ် နွေးထွေးစွာနေပါ။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အသီးအနှံရှိတယ်။ နှစ်သစ်ကို စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ လူတွေဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝကို မျှော်လင့်နေကြပြီး လူတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို မျှဝေခံစားကြပြီး အသီးအနှံတွေကို မျှဝေခံစားကြပြီး နှစ်သစ်နဲ့ ဘဝသစ်ကို စီစဉ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ပြည်တွင်းပလတ်စတစ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် Lesite သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး အသစ်များကို မိတ်ဆက်ကာ ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်ပုံသဏ္ဌာန်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အဆင့်မြှင့်တင်ကာ အမြင့်အသစ်သို့ ခရီးဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ သန့်စင်သောစီမံခန့်ခွဲမှုမှ ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုများအထိ အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်အသစ်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် စျေးကွက်၏ မတူညီသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်၊ ၎င်းသည် အနာဂတ်၏ လျင်မြန်တည်ငြိမ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးမှုများအတွက် ခိုင်မာသော စေ့ဆော်မှုနှင့် အာမခံချက်တို့ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်အသစ်ထုပ်ပိုးမှုက အမြင့်အသစ်တွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
အရေးပါမှုကို ပြောင်းလဲရန်။ 2021 Lesite အမိုးအကာစီးရီး ထုတ်ကုန်များသည် အသစ်စက်စက် ထုတ်ကုန်အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးပုံဖြင့် အများပြည်သူရှေ့တွင် ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဤထုပ်ပိုးမှု အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည် ထုတ်ကုန်အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးမှုသေတ္တာ၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာအတွင်းပိုင်း၊ ထုတ်ကုန်ကိုယ်ထည်၊ ထုတ်ကုန်အမည်ပြား၊ ထုတ်ကုန်လက်စွဲနှင့် ထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအတွက် အဓိကဖြစ်သည်။ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူ၊ ရှင်းလင်းပြီး မှတ်မိနိုင်သော အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်များကို လေယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့် အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးသေတ္တာတွင် ထားရှိပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်သည် တူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ ပြောင်လက်တောက်ပသောထုတ်ကုန်များကြားတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော စားသုံးသူများ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကို ရရှိနေချိန်တွင်၊ Lesite Technology သည် ထုပ်ပိုးမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများမှတစ်ဆင့် အမှတ်တံဆိပ်၏အတွေးအခေါ်နှင့် တန်ဖိုးများကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာပြသနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကြောင့် အဆင့်မြှင့်ပါ။ Lesite Technology သည် အမှတ်တံဆိပ်၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတွင် 15 နှစ်ကြာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဤဒီဇိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည် Lesite အမှတ်တံဆိပ်ပုံ၏ နောက်ထပ်အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် မောင်းနှင်သော Lesite သည် အသွင်ပြောင်းမှုအသစ်ကို ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းမှ လှုံ့ဆော်ပေးသော အမှတ်တံဆိပ်၏ အဓိပ္ပါယ်သည် Lesite ကို ဖြည့်စွက်ပေးပါသည်။ လက်ရှိသုံးစွဲမှုမြင်ကွင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ချို့ယွင်းချက်များ၊ ယနေ့ခေတ်တွင် ထုတ်ကုန်များနှင့် ထုပ်ပိုးမှုနှစ်ခုစလုံး၏ ဉာဏ်ပညာကို လိုက်စားမှုတွင်၊ Lesite သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ခေတ်နှင့်အညီ ရှေ့သို့တိုးနေပါသည်။
1. Package outsourcing အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်
Lesite အမှတ်တံဆိပ် အင်္ဂလိပ်ပုံး
2. ဘောက်စ်အတွင်းပိုင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက်
3. လေယာဉ်ကိုယ်ထည် LOGO ကို အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်
Lesite အမှတ်တံဆိပ် ကိုယ်ထည်စတိုင်၏ တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း
4. ထိန်းချုပ် panel ကို အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်
Lesite အမှတ်တံဆိပ် တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း ကိုယ်ထည်စတိုင်
5. တံဆိပ်ပြားကို အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်
Lesite တွင် အင်္ဂလိပ်အမည်များ ပါရှိသည်။
Lesite တွင် တရုတ်အမည်တံဆိပ်ပါရှိသည်။
6. လက်စွဲစာအုပ်ကို အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်
Lesite အမှတ်တံဆိပ် အင်္ဂလိပ်လက်စွဲ
Lesite အမှတ်တံဆိပ် တရုတ်လက်စွဲစာအုပ်
Lesite Technology ၏ အမိုးအကာစီးရီးထုတ်ကုန်များ၏ ထုပ်ပိုးမှုအသွင်အပြင်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ ထုပ်ပိုးမှုအသစ် (နံပါတ်စဉ်) ကို 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 1 ရက်နေ့တွင် စတင်ရောင်းချပါမည်။ လက်ကျန်ထုပ်ပိုးမှု သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် လက်ရှိထုတ်ပိုးမှုဟောင်းကိုလည်း ရောင်းချပါမည်။ ထုပ်ပိုးမှုအသစ်ရော အဟောင်းပါ ထုတ်ကုန်တွေက အတူတူပါပဲ။ အဆင့်တိုင်းရှိ အေးဂျင့်များနှင့် ဖြန့်ဖြူးသူများသည် ၎င်းတို့၏မူရင်းစာရင်းတွင် ထုပ်ပိုးမှုထုတ်ကုန်အဟောင်းများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုအသစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် တဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းအတွက် သင်စိုးရိမ်နေရန် မလိုအပ်ပါ။
Lesite တွင် သင်၏ရေရှည်ပံ့ပိုးမှုနှင့် ယုံကြည်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် အနာဂတ်တွင်၊ Lesite Technology သည် အမြဲတမ်းစျေးကွက်ကိုဦးတည်ပြီး၊ ဖောက်သည်ဗဟိုပြု၊ ထုတ်ကုန်များကို ဆက်လက်သုတေသနပြုရန်၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကာ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး လေးစားဖွယ်ကောင်းသော လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်သည်။